Arsenal Oo Hoos Uga Sii Dhacday Heerkii Ay Joogtay Waqtigii Unai Emery, Rikoodhada Guulaha Iyo Barbar-dhigga Waqtigoodii Emirates - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal Oo Hoos Uga Sii Dhacday Heerkii Ay Joogtay Waqtigii Unai Emery, Rikoodhada Guulaha Iyo Barbar-dhigga Waqtigoodii Emirates
Arsenal Oo Hoos Uga Sii Dhacday Heerkii Ay Joogtay Waqtigii Unai Emery, Rikoodhada Guulaha Iyo Barbar-dhigga Waqtigoodii Emirates
Mikel Arteta ayaa waajahaya Unai Emery oo ahaa ninkii uu ka beddelay shaqada iyagoo isku beegmay semi-finalka tartanka Europa League, iyadoo uu Emery wato kooxda reer Spain ee Villarreal.
Arsenal ayaa 4-0 kaga soo badisay Slavia Prague, halka Villarreal ay 3-1 kusoo garaacday Dinamo Zagreb.
Ciyaartan xiisaha badan ee ay kala hoggaaminayaan labada tababare ee reer Spain ee midkoodna hadda laylinayo Arsenal, midka kalena hore loo caydhiyey, waxay noqon doontaa mid si gaar ah loogu fiirsado farsamooyinka iyo xeeladaha labada macallin.
Villarreal ayaa lugta hore oo dhacaysa April 29 martigelin doonta, halka ciyaarta labaadna toddobaadka xiga lagu dheeli doono Emirates Stadium.
Unai Emery ayaa ah khabiir takhasus ku ah tartankan, waxaana uu ku guuleystay saddex jeer iyadoo uu sannadkii 2018kii Arsenal ka beddelay Arsene Wenger, waxaanu shaqadaas hayay illaa November 2019 oo ahayd xilligii isagana shaqada laga caydhiyey.
Hadda waa sidee rikoodhka Mikel Arteta ee Arsenal, miyuu se ka fiican yahay Unai Emery oo la caydhiyey?
Labadan tababare, ayaa isku mid ka ah kulamada ay guuleysteen intii ay joogeen Arsenal, waxaanu mid walbaa guul helay 26 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah.
Laakiin Unai Emery ayaa kaga fiican dhinacyada kale oo dhan marka laga eego dhinaca kulamada laga badiyey iyo barbarraha ay galeen.
Arteta waxa uu tababare u ahaa Arsenal 49 ciyaarood, halka uu Emery hoggaamiyey 47 kulan, waxaana mid walbaa uu badiyey 26 ciyaarood inkasta oo uu Arteta laba kulan dheer yahay dhinaca kulamada uu joogay kooxda.
Mikel Arteta waxa uu muddadaas barbarro keenay 8 ciyaarood, halka uu Emery 14 ciyaarood barbarro galay.
Guul-darrooyinka ayaa sidoo kale uu Arteta aad ugu badan yahay, waxaana laga badiyey 15 ciyaarood, halka Unai Emery laga badiyey toddoba ciyaarood oo kaliya.
Sawirkan kaga bogo rikoodhka labada tababare ee waqtigoodii Arsenal